Maxay aluminium isku-darka aluminiumku caan u yihiin Maxay yihiin faa'iidooyinka？
1.High cimilada iska caabinta.ACP dhib malahan heerkulka sare ee qorraxda ama maalmaha barafka heerkulka hoose uma muuqan doono waxyeello dabiici ah, guud ahaan kiiskan waxaa loo isticmaali karaa muddo toban sano ah iyada oo aan hoos u dhicin。 Tusaale ahaan, ma jiro shucaac iftiin xoog leh, ma jiro heer kul aad u hooseeya, waxayna noqon kartaa m ...
Wali ma waxaad u isticmaaleysaa qaab dhismeedka plywood-ka dhismaha? Qaab-dhismeedka Aluminium: Waqti waad dhaaftay
Qaab-dhismeedka Aluminium waa qaab-dhismeedka afraad ee ka dambeeya qaab-dhismeedka plywood, qaab-dhismeedka birta, iyo qaab-dhismeedka caagga ah. Marka loo barbardhigo jiilalkeedii hore, waxay leedahay faa'iidooyinka miisaanka khafiifka ah, qalafsanaanta sare, iyo dib-u-adeegsiga sarreeya. Qaab dhismeedka aluminium wuxuu leeyahay miisaanka ugu fudud exis ...
Kala saarida iskudhafka ringlock liita iyo iskudhafka ringlock ee tayada leh
Isku dhejinta ringlock waxay leedahay astaamaha kala duwanaansho xoog leh, waxtarka sare, awood qaadis xoog leh, badbaado iyo isku haleyn, mana sahlana in dhibaatooyin la keeno inta la isticmaalayo. Rarista iyo dejinta waa mid fudud oo habboon, oo ku habboon keydinta. Faa'iidooyinkaani waxay sameeyaan ringloc ...
Isbedelka kahadalka giraanta ayaa durba cad, qiyaasta ayaa la filayaa inay ka badato 170 bilyan yuan sanadka 2027!
Marka laga hadlayo iskudhafka ringlock, isbeddelkeeda horumarineed durba waa cadahay. Waqtigan xaadirka ah, gobollo iyo magaalooyin badan ayaa soo saaray siyaasado lagu hirgalinayo iskudhafka ringlock, oo ay kujiraan Beijing, Shanghai, Shenzhen, Jiangsu, Hubei, iwm, nooca jeexjeexa ringlock scaffolding wuxuu kuxiranyahay si balaaran ayaa loo isticmaalaa t ...
Qeexitaan loogu talagalay ereyga iskudhafka ringlock, qorshaha dhismaha ee iskudhafka ringlock! Waxyaabaha injineernimada dadku waa inay ogaadaan!
Kahor dhismaha qalabka wax lagu qoro ee ringlock, qorshaha dhismaha xarafka ringlock waa in la qaabeeyaa. Qorshaha dhismaha waxaa loo qaabeeyey iyadoo la raacayo qeexida miisaanka ringlock-ka. Aynu eegno qaar ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee qeexidda iskudhafka ringlock. Horaantii ...
Culus Waajibaadka Isku-dhafka Ringlock, Qalabka Birta lagu hagaajin karo, Kwikstage Qalabka Isboortiga, Qaybta Wareegtada Wareegta Ringlock, Iskeelka Isku-dhejiska Isku-hagaajinta Jack, Qaybo ka mid ah Isgoysyada Ringlock,